ရှေးမြန်မာ..: " နိတိ စန္ဒြ " ဒင်္ဂါး မဟုတ်ပါ
" နိတိ စန္ဒြ " ဒင်္ဂါး မဟုတ်ပါ
ဒီဒင်္ဂါး ကိုတွေ့ စက အတုလို့ ထင်မိတယ်။
ဗြိတိန် ပြတိုက်၊ လန်ဒန် ( British Museum, London ) က သုတေသန လုပ်နေဆဲ ဒင်္ဂါးပါ။ ပြတိုက်က ဒီဒင်္ဂါးပေါ်မှာရေးထားတဲ့ စာကို " နိတိ စန္ဒြ " လို့ လောလောဆယ် မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။ တိကျသေချာတယ်လို့တော့ပြောမထားပါ။ မှားနေရင် ထောက်ပြပါလို့တော့ပြောထားတဲ့အတွက် ထောက်ပြဖို့ ကြိုးစားမိပါတယ်။
သေချာတာကိုအရင်ပြောရရင် " နိတိ စန္ဒြ " ဒင်္ဂါး မဟုတ်ပါ။ ဒီဒင်္ဂါးပေါ်မှာရေးထားတဲ့ စာက ရှေးဟောင်း ဗြဟ္မီ အက္ခရာပါ ။ " နိတိ စန္ဒြ " ဒင်္ဂါး အစစ် နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရအောင် ပြထားပါတယ်။
ဒင်္ဂါး ပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စာ " နိတိ စန္ဒြ " မဟုတ်ရင် ဘာတွေရေးထားတာလဲ ၊ ဘယ်သူ့ နာမည်ဖြစ်မလဲ။ နောက်ဆုံး စာလုံး သုံးလုံးကိုဘဲ ဖတ်နိုင်ပါသေးတယ်။ သိရင်ပြောခဲ့ကြပါဦး။
ရခိုင် ဘုရင် " နိတိ စန္ဒြ " ဒင်္ဂါး
ရခိုင် ဘုရင် " နိတိ စန္ဒြ " ဒင်္ဂါး အကြောင်း အသေးစိတ် ကိုအရင်ပိုစ်တွေမှာ သေချာရေးပြီးသား ဖြစ်လို့ ထပ်မရေးတော့ပါ။
Posted by ရှေးမြန်မာ at 4/04/2010
i also think it is not niti sandra's coin. as soon as i 'd read this post, i looked u san tha aung's book, arakan alphabets before ad 6. i think the spelling 'niti sandra' is wrong. the coin below is from the book and the picture above is from wikipedia, i think.
ပုဂံ " သင်္ကြန် "
ကုန်ရောင်းပြေစာ (၂၆.၅.၇၆ )